Vaovao - Izany no tavoahangy fiainana vaovao, ny elo Coca-Cola RPET “nipetraka” ny Qingdao North Railway Station
Tamin'ny Aogositra, 2020, teo amin'ny fiampitana mpandeha an-tongotra ny Qingdao North Railway Station, elo manokana maromaro no natsangana, izay nanaovana pirinty ireo singa manana ny toetra Qingdao toy ny spray, seagull ary ny maritrano. Ny tena nahavariana dia ny teny hoe "tavoahangy plastika aho taloha" sy "Miahy izahay" vita pirinty amin'ny sisin'ny elo, izay nahasarika ny sain'ny mpandeha an-tongotra.
Inona no ifandraisan'ny elo amin'ny tavoahangy plastika? Hita fa tavoahangy plastika namboarina daholo ireo elo ireo. Aorian'ny fanodinana, ny tavoahangy plastika foana dia voahodina amin'ny alàlan'ny andian-dahatsoratra ary farany amboarina ho karazana lamba milamina tontolo iainana vaovao, dia ny fitaovan'ny lamba RPET, izay hevitra vaovao eo amin'ny sehatry ny fanodinana fitaovana. Afaka mampiasa tavoahangy plastika hatramin'ny 17 ianao hanaovana elo-masoandro ary hamerenana azy io indray.
Fantatra fa ireo elo amin'ny masoandro ireo izay nalaina avy tamin'ny foto-kevitry ny fampandrosoana maharitra an'i Coca Cola - "Tsy misy fako eto amin'izao tontolo izao", dia natao hilazana ny tsimbadin'ny fiainana feno an'ny PET, mba hahafahan'ny olona maro kokoa hahafantatra ny fananan'ny plastika PET sy ny maha-zava-dehibe ny fanodinana.
Nandritra ny taona maro, CofCO Coca-Cola (Shandong) Co., Ltd. dia nanolo-tena hanampy amin'ny famoronana hatsarana ny tanàna, sivilizasiôna ary fiarovana ny tontolo iainana, mifantoka amin'ny fanavaozana sy ny fiahiam-bahoaka, mba hiara-manangana ny fananganana sivilizasiôna an-tanànan'ny Qingdao .
Ny lamba vita amin'ny fibres namboarina tamin'ny alàlan'ny fanodinana ny "tavoahangy coke" dia azo averina ho lasa fibre PET miaraka amina akora averina 100%, izay afaka mampihena ny fako. Amin'izao fotoana izao dia avo be ny fanjifana tavoahangy fisotro plastika PET any Sina. Ny fanodinana tavoahangy zava-pisotro PET nariana dia tsy vitan'ny fampihenana ny fahalotoan'ny tontolo iainana, fa hanovana ny fako ho harena koa.
Ho an'ny PVC misy klôro (no tena loharanon'ny dioxin ary dioxin dia voaporofo fa carcinogens) ary misy ny fandotoana ny tontolo iainana metaly mavesatra, plastika sns ..., amin'ny fampiasana ny haitao farany, ny famokarana Taiwan dia tsy misy PVC, ny atiny mavesatra ary saika tsy afaka refesina, atokana hisolo ny vokatra PVC, ho lasa mpamatsy fitaovana fiarovana tontolo iainana vaovao.